Zugarramurdi गुफाहरू, नाभरामा खजाना | यात्रा समाचार
Zugarramurdi का गुफाहरू, नाभरामा खजाना
मारिएला क्यारिल | | España, के हेर्ने
नेवार यो हालसालै Actualidad Viajes को मार्गमा देखिन्छ, र यससँग धेरै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक खजाना छन्। आज Zugarramurdi गुफाहरू, केही गुफाहरू चुरोटहरु लुकाउनको लागि प्रतिष्ठाको साथ ...
गुफा, करार, परीक्षण, खूनी यातना? कस्तो ककटेल! त्यसोभए अब केहि समय खेर फालौं र नाभराबाट यी राम्रा खबरहरू जान्यौं।
Zugarramurdi र यसको गुफाहरू
पहिलो यो नाम एउटा सानो शहर हो जुन हो स्पेनको उत्तरी नवर्राको स्वायत्त समुदायमा। यो २०० भन्दा बढी आत्माले बास गर्छ र हरियोले घेरिएको तल्लो, सेतो घरहरूको सानो समूह हो। जे होस् नाम बास्क मूलको हो, तिनीहरू यसको मूलसँग सहमत भएनन्। के स्पष्ट छ कि यदि तिनीहरू नाभरामा बोक्सीहरूको बारेमा कुरा गर्छन् भने उनीहरू जुगारामुर्दीको बारेमा कुरा गर्छन्।
यो शहर फ्रान्सेली सिमानाको नजिक छ, पश्चिमी पाइरेनीसमा, र शहरको केन्द्रबाट केवल meters०० मिटर जति प्रसिद्ध गुफाहरू छन्। तिनीहरू कार्ट मूलका गुफाहरू हुन् र मुख्य प्रवेशद्वारहरू जहाँ यसलाई अहिलेसम्म पुग्न सकिन्छ पानीको बहाव द्वारा उत्खनन गरिएको थियो, अझै प्रचुर मात्रामा, जसलाई रेगाटा डेल ईन्फेरिनो वा बास्क भनिन्छ, Infernuko Erreka।
यो स्ट्रिमले गुफालाई पार गर्दछ जुन टनेलको आकार दिन्छ जुन १२० मिटर लामो छ र औसत चौंडाई एक छेउमा २२ र २ meters मिटर बीचमा र अर्कोमा केवल १२। उचाईमा यो १० र १२ मिटरको बीचमा छ। यो एक मात्र प्वाल होइन तरaहो तीनवटा ग्यालरीहरूको साथ विस्तृत गुफा, सुरु counting गन्ने, टावरि,, जुन एकमा भेटिन्छ।
र किन यो भनेर चिनिन्छ चुपचाप गुफा? ठिक छ, किनकि यस्तो देखिन्छ कि अन्तमा शताब्दी XVI यी पर्खालहरूको बीचमा भयो मूर्तिपूजक बिदा र हामीलाई थाहा छ कि मूर्तिपन्थी क्याथोलिक चर्चका लागि उपयुक्त छैन। त्यसो भए १ the औं शताब्दीको सुरूमा १ 1609० and र १ 1614१ entire बीचमा सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रियाको विकास भयो जसमा धेरै व्यक्तिहरूलाई सताइयो, पक्राऊ गरियो र तिनीहरूलाई दोषी ठहराइयो। स्पष्ट रूपमा, पुरुषहरू सहभागी भए तर महिलाहरू मनपर्दो सताइएका थिए।
ईतिहासको अनुसार १ 1610१० मा एक अटो डे फे थियो, बोक्सीविद्याको लगातार आरोपहरूको परिणाम। त्यसोभए, जिज्ञासु भेले-अल्भाराडो आइपुगे र अनुसन्धान गर्न थाले र अन्तमा त्यहाँ suspects० जना संदिग्ध व्यक्तिहरू थिए जो उनीसँग लोगरोनो गएका थिए। अन्वेषणले अन्तमा एघार जनालाई खम्बामा जलाउन सजाय दियो। बोनफायर अघि पाँच जना महिला मरे तर उनीहरू अझै त्यहाँ आगोको आगोमा राखिए।
भाग्यवस यी दुखद् छिमेकीहरूका नामहरू इतिहासमा रहिरहे र ती गुफाहरूको प्रवेशद्वारमा एउटा पट्टिका छ जुन तिनीहरूलाई सम्झन्छ। अरु के छ त प्रत्येक अगस्त १aमा एक पार्टी बोलाइयो जिकिरो जेट, एक agape जसमा करीव एक हजार मानिसहरू सम्मिलित हुन्छन् र जहाँ थुमा दांव बालेको हुन्छ। कस्तो याद!
गुफामा अरू कुनै आकर्षण हुँदैन, तिनीहरूसँग स्टलागिमेट्स वा स्टेलाक्टाइट्स वा गुफा चित्रहरू छैन तर तिनीहरू अपार छन् र लोभका कथाहरू मनपर्दो पर्यटक चुम्बक हुन्। यसैले त्यहाँ एउटा मार्ग छ जुन गुफा भित्र पस्दछ, तर पनि त्यहाँ अर्को छ जुन वरिपरि दगुर्छ र त्यो पनि सिफारिश गरिएको हो किनभने उर्डाजुबी / उर्दाक्स र सारा गुफाहरूसँग जुगारामुर्दी गुफामा मिल्दछ.
यो रूपमा चिनिन्छ गुफाहरूको बाटो र तिनीहरू कुल।,।6किलोमिटर छन्। त्यहाँ यसलाई चिन्ह लगाउने चिह्नहरू छन्, तिनीहरूमा निलो घोडा कोरिएको। भाग्यवस यो सजिलो मार्ग हो जुन ज and्गल र हरियो घासका मैदानहरूमा काट्छ। ह्यान्डसम
अर्कोतर्फ, चुडैहरूको बारेमा जानकारी जोड्नको लागि हो पिचहरू संग्रहालय। संग्रहालय शहरको पुरानो अस्पतालमा काम गर्दछ र गुफाहरू भन्दा धेरै टाढा। यो ठाउँका बारे सिक्नको लागि हो चुरोट, अन्वेषण यसको पछाडि लोभ र ईर्ष्याको कथाहरू। यस क्षेत्रमा त्यहाँ एक सामान्य परिचय छ र त्यस पछि हन्ट फर विचस भनिने एक अडियोभिजुअल प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले १ 1610१० मा जे भयो सो बताउँछ।
पहिलो तल्लाले मारिया सिमिलेगुइको कथा बताउँदछ, ती विश्वासघातीहरू मध्ये एक जसले अभिव्यक्तिको निन्दा गर्‍यो, यद्यपि उनले यसमा उनीहरूमा सहभागी भइसकेको थियो। दोस्रो तल्लामा हामी मिथ्या र दन्त्यकथामा प्रवेश गरिसकेका छौं, जडिबुटी र मातृसत्तात्मक समाजको आकृति जुन त्यहाँ शासन गर्‍यो र चर्चको दर्शनसँग मेल खाँदैन। अडियोभिजुअलहरू, प्रदर्शनहरू, सबै एकसाथ आउँदछन् ताकि तपाईं ईतिहासको बारेमा धेरै जान्न सक्नुहुन्छ र हो, हर्बलिजम पनि।
वास्तवमा, म सिफारिस गर्दछु कि विचस संग्रहालय पहिले र त्यसपछि जागर्रामूर्दी गुफाहरू। Aim यात्रा गर्नका लागि तालिका र मूल्यहरूः
सोमबार र मंगलबार सेप्टेम्बरमा बन्द हुन्छ। त्यसो भए, बुधवार देखि आइतवार बिहान ११ बजे देखि 11::7० सम्म खुल्छ। अक्टुबर देखि उही दिन बन्द हुन्छ तर साँझ 30 सम्म खुल्छ र सप्ताहन्तमा यो बिहान ११ बजे देखि6सम्म खुल्छ।
एल पिलर ब्रिजमा, अक्टोबर १२ देखि १ from सम्म, यो बिहान ११ देखि साँझ 12 सम्म खुल्छ। नोभेम्बर ब्रिजमा, १ देखि from सम्म, यो उही समयमा र डिसेम्बर ब्रिजमा खुल्छ, १ देखि from सम्म।
प्रवेशद्वारको लागत 4, १० युरो छ
जानकारीको एक टुक्रा: त्यहाँ यात्रा को सिढी छन् त्यसैले सावधान हुनुहोस् यदि तपाईं बच्चाहरू र एक stroller वा व्हीलचेयरको साथ जाने सोच्नुहुन्छ किनकि साइट तयार छैन। न त घरपालुवा जनावरहरू भित्र छिर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, यद्यपि सामान्यतया ग्रीष्मकालमा7बजे गुफाहरू बन्द हुन्छन् तिनीहरू पछि बन्द हुन्छन्।
हामीले अहिलेसम्म सकेनौं: २०१ 2013 मा निर्देशक Axel de la Iglesia लेस ब्रुजस डे Zugarramurdi फिल्म फिल्मायो कार्मेन माउरासँग, अन्य कलाकारहरूमा। यो १1610१० को अटो डे फेबाट प्रेरणा पाएको थियो र यदि तपाईंले यो देख्नुभयो तर अझै नभारामा वास्तविक गुफामा जानु भएन भने, म तपाईंलाई भन्छु कि फिल्मको एक ठूलो अंश यहाँ चित्रित गरिएको थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » Zugarramurdi का गुफाहरू, नाभरामा खजाना
Andorra मा के हेर्ने
सोफे सर्फिंग के हो